Su'aal: Galmada badan?
Author Topic: Su'aal: Galmada badan? (Read 11325 times)
« on: January 07, 2010, 10:12:29 AM »
Asc wr w
Waxaan rabaa in an wax ka,ogaado galmada badan dhibaato ama faa,ido intee la,eg ayay leedahay.
Isbuucii meeqa malin ayaa sameen kartaa cafimad ahaan. hadii ad isbuuc oodhan xaskaga ugalmooto dhibaato intee la,eg ayay leedahay? hadiise malintii laba jeer xaskaga ad ugalmoto maxay dhibato ama fa,iido kuuledahay?
waxaan ciyaaraa kubada marwalba oo an ciyarayo waxa ikala baxa lugta dhanka xaniinya hoostiisa waa lugta bidix inta badan waxan dareemaa marka an ciyaro 30minit oo waxyar aa nasto dibna ciyarta ugu soonoqdo waxaa idhiba socodka marka waxan raba in an wax ka ogado waxa sababay xanuunkas.
Re: Su'aal: Galmada badan?
« Reply #1 on: January 16, 2010, 08:15:15 PM »
Haddii galmada aadan ku walfin (Sex addiction) wax dhibaato caafimaad ah malahan.
Xanuunka aad ka dareemayso lugta waa in aad u tagtaa dhakhtar si uu kuu wiisiteeyo.
Views: 6535 October 19, 2016, 06:58:27 PM
Views: 11418 May 11, 2011, 04:28:24 PM
Views: 7855 May 19, 2011, 08:49:53 PM
Views: 43751 August 12, 2015, 01:45:58 PM
Views: 36068 November 17, 2009, 07:36:08 PM